Mety ho tsy fantatrao —raha miteny espaniola ianao dia mety miteny arabo sasantsasany ihany koa · Global Voices teny Malagasy
Mety ho tsy fantatrao —raha miteny espaniola ianao dia mety miteny arabo sasantsasany ihany koa
Voadika ny 21 Oktobra 2015 18:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, Български, Aymara, عربي, polski, Català, 繁體中文, 简体中文, Esperanto , Italiano, English
Ny mandan'i Alhambra ao Granada, Espaina, naorin'ny Maoro miteny arabo tamin'ny taonjato faha-13 raha nanapaka tamin'ny faritra sasany tamin'ny saikasosy Iberiana izy ireo. Saripikan'i Jeanne Menj. CC BY-ND 2.0
Ity lahatsoratra ity sy ny tatitra amin'ny onjampeo nataon'i Joy Diaz ho an'ny The World nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 15 oktobra 2015 ity dia nivoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Rihab Massif, izay avy any Libanona, dia mpampianatry ny akaninjaza ianaran'ny zanako vavy aoAustin. Amin'ny maha mbola zazavavy kely azy dia miteny espaniola kokoa ny zanako vavy Camila. Ary tsaroan'i Massif ny andro nahasorena an'i Camila noho ny tsy nahatsiarovany voambolana anglisy na dia iray aza.
“Nolazainy ahy ny camis-ny” hoy i Massif.
Camisa dia voambolana espaniola milaza ny “akanjo,” ary takatr'i Massif tsara izany satria ny camis dia milaza io zavatra io ihany amin'ny teny arabo.
“Ary izaho tamin'izany nanao hoe ‘Oh! misy teny vitsivitsy misy ifandraisany amin'ny teny arabo an,'” hoy izy.
Ijerena ny hamaroany dia nanao fampiasana izaho sy i Massif. Hiteny voambolana amin'ny teny espaniola aho dia hamerina izany amin'ny teny arabo izy.
“Izahay manao hoe ceit,” hoy i Massif.
“Izahay manao hoe guitar.”
Rehefa nahafantatra izany aho dia tahaka ny maheno voambolana arabo na aiza na aiza alehako.
Raiso, ohatra, ny iray amin'ny hira tiako indrindra nataon'i Juan Luis Guerra nahazo ny Grammy Latinina.
“Ojalá Que Llueva Café” izao dia ahitana teny hoe café (coffee) sy ojalá (Sitrapon'Andriamanitra, na antenaina) — izay samy avy amin'ny teny arabo.
Na raiso ny fehezanteny manaitaitra nataon'ilay mpihira salsa Celia Cruz, ¡Azucar!, midika hoe sucre-sugar na siramamy avy amin'ny teny arabo hafa koa.
Lazain'i Victor Solis Parejo, mpandinika ny teny avy amin'ny Oniversiten'i Barcelona ao Espaina fa misy ny sasantsasany amin'ireo mpiteny espaniola no nandray lovan-kolontsaina avy amin'ny Maoro. “Maoro” no anarana anondroana ireo vondrona mpiteny arabo ay ao Afrika Avaratra izay nananibohitra tamin'ny ho lasa Espaina tamin'ny taonjato fahavalo. Naharitra 700 taona ny herim-pitaomany ary mbola hita mandraka ankehitriny.
“Indrindra rehefa mandeha any atsimon'i Espaina ianao. Ohatra amin'izany ny ao Merida, tanàna nahaterahako, manana Alcazaba Arabe, manda arabo, izahay ao,” hoy i Parejo says. “Ka dia mahita izany ao amin'ny tanàna ianao amin'izao fotoana izao, saingy mbola afa-mahita ny fisiana Islamika, izany fisiana arabo izany ao amin'ny fiteny.”
Ary mazava loatra, niampita nankany amin'ny kaontinantan'i Amerika niaraka tamin'ny Espaniola izany fisiana izany. Tokotokony ho 4000 eo ho eo ny voambolana espaniola heverina ho ay amin'ny teny arabo mivantana. Izany no mahatonga an'i Maria Gutierrez, Meksikana mpiasa sosialy iray miaraka amin'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa ao Jordana, nilaza fa mitondra karine kely izy any amin'izay toerana rehetra alehany.
“Yeah! Miezaka ny mitsongo ireny voambolana rehetra ireny aho. Tahaka ny hoe, ‘Teny iray hafa indray!’ Farafahakeliny aho mahita teny iray isan'andro, ary hoy aho hoe, ‘Oh, ary tena ilay amin'ny teny espaniola mihitsy!’ na, ‘Tena mifanakaiky amin'ny teny espaniola mihitsy,'” hoy ravehivavy.
Arakaraka ny mahahaingana ny ifehezan'i Gutierrez ny fiteny, no mampahomby azy amin'ny asa ataony, ary amin'izao fotoana izao ny fahafahany miteny espaniola no manafaingana izany.
Nahoana no zava-dehibe ho an'ny Amerikana ity fifangaroan'ny teny Espaniola sy Arabo ity? Eny, Anglisy sy Espaniola ny teny roa be mpiteny indrindra ao Etazonia. Ka manontany ny sasany hoe inona no mety hitranga amin'ireo teny ireo rehefa mandeha ny fotoana, anisan'izany i Victor Parejo.
” Velona ny teny”, hoy izy.
Mifanaraka ireo fiteny ary mifampindrana voambolana, indrindra ireo monina mifanakaiky.
“Mbola tsaroako ny fahatongavako voalohany tao Texas,” hoy Parejo. “Nankany any amin'ity hotely ity niaraka tamin'ny vadiko aho ary nanontany anay ny mpampandroso sakafo hoe: ‘Hisakafo hariva ao anatiny sa handeha any amin'ny Patio ianareo?’ Mbola tsy nahare izany teny izany [patio] amin'ny teny Anglisy mihitsy aho.”
Teny espaniola ny Patio.
Raha ny misy ny herim-pitaomana ary mbola mamazivazy matetika momba ny fisian'ny “Spanglish” [espaniola-anglisy] isika, alaivo sary an-tsaina izay teny horesahan'ny Amerikanina ao anatin'ny 100 na 200 taona, raha olona miteny Espaniola am-polony tapitrisany hafa no miantso an'i Etazonia ho fireneny.